1. iche The akara IC eji na imewe nke LCD meziri 、 Ngwa mma dị ka nzacha na nghazi fim, Ọ na-metụtara iche nke panel, N'ihi na n'ozuzu ọrụ, A iche ruru nke 350: 1 bụ ezuru, Otú ọ dị, ndị dị otú ahụ dị iche n'ọhịa ọkachamara enweghị ike izute mkpa nke ndị ọrụ. C ...
Obere ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, ngosi ụcha OLED dị mma maka anya mmadụ na ihe ndị ọzọ na-eme ka OLED dị mma karịa LCD. Ndị enyi na-agakarị ọdụ B na-anụkarị ikpe a: Barrage Eye Protection! N'ezie, Achọrọ m ịgbakwunye nchebe Buff na onwe m, only chọrọ naanị ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ TV ...
Isslọ ọrụ na-ahụ maka ihe ntanetị Nissha na-ebuli kwa ụbọchị! Mmetụta ọrịa ahụ nwere oke, yana amụma ego H1 ga-ebili
Mmetụta nke pneumonia coronavirus (COVID-19, nke a na-akpọkarị pneumonia ọhụrụ) na-agbasa, Nissha, nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ aka, tụgharịrị site na ọnwụ na uru ikpeazụ nkeji iri na ise. Ma bulie amụma maka akụkọ ego H1 nke afọ a, Kpalite ...
azụlitewo ihuenyo mmetụ na-enweghị kọntaktị nke nwere ike ịhụ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ, Naanị gbanye mkpịsị aka gị, Enweghị mkpa imetụ ihuenyo ahụ aka. Na mgbasa nke okpueze ọhụụ ọhụụ, A na-atụ anya na a ga-etinye ya na mgbochi -spray partitions arụnyere na ndenye ọpụpụ counters na-echekwa ....
Obere okpomọkụ Poly-silicon (LTPS) bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị na North America na Japan iji belata ike ike ngosipụta PC ngosi ， Teknụzụ mepụtara iji mee ka Note-PC pụta ìhè ma dị mfe, Gburugburu etiti 1990s, teknụzụ a malitere banye ikpe ikpe。 ne ...
Okwu Mmalite ka LCD？
Ngosipụta ngosipụta bụ ihe dịkarịsịrị mkpa na nke dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ngosiputa ngosi na-egosi anyị ụdị ozi ọ bụla site na ihuenyo ahụ, Ka anyị nweta ọtụtụ ozi na ya. Dịka ihe dị iche iche na teknụzụ dị, Enwere ike kewaa n'ime CRT ngosipụta display Plasma ngosi. Ngosipụta ...
Kedu ka esi kee usoro LCD A na B?
Dabere na ogo nke LCD panel, enwere ike kewaa ya na akara atọ: A, B na C ， Ndabere maka nhazi bụ ọnụ ọgụgụ nke pikselụ nwụrụ anwụ. Mana enweghị ụkpụrụ iwu siri ike na ngwa ngwa dị n'ụwa, ya mere, ụkpụrụ nghazi nke mba dị iche iche abụghị otu. anyị ...
Etu esi enweta ihe igwe eletrọnik kacha mma
Souring ọma mmiri dị mkpa. Firstly, mkpa ka ị mara na mmiri na-nkewa n'ime isi ihe abụọ na isi - n'ezinụlọ na n'ọrụ. Ihe agafe: Resistors, Capacitors, Inductance Electronic components are classified as active or passive to the works. Na mpempe, a ...
Igwe Elu Igwe & Ngwa SMT
Elu ugwu technology, SMT na ya metụtara n'elu ugwu ngwaọrụ, SMDs nke ukwuu adị adị PCB nzukọ dị ka mmiri nanị efego na osisi. Legharịa anya n'ime ngwa elektrọnik a na-ere ere n'oge a ma juputara na nkeji nkeji. Kama iji omenala ...
Ọnọdụ ahịa ụlọ ọrụ Global panel maka ọkwa nke atọ nke 2020
Display Supply Chain Consultants CC DSCC） Akụkọ e wepụtara na nso nso a kwuru na ， Ahịa nke ụlọ ọrụ panel na nkeji nke atọ nke 2020 ruru ọkwa kachasị elu kemgbe nkeji nke anọ nke 2017 ， Maka $ 30.5 ijeri, Mmụba nke 21% site na nkeji gara aga , Mmụba kwa afọ nke 11%。 ...
Mkpisiaka akara ugo mmụta n'okpuru TFT FoD ihuenyo na-ewere ọnọdụ
The akara mkpisiaka ude penetration ọnụego n'okpuru ihuenyo amụbawo, Chama Aka 30% ka anya dị ka 2021 E nwere ndị gị n'ụlọnga amụma, The mkpisiaka ude ude technology n'okpuru ihuenyo na oru na 2018, Ọ na-atụ anya na ndị ọzọ na ndị ọzọ kwere omume teknụzụ ga-ẹkenam n'ime pro. ..
N'afọ na-abịa 86% nke LCD TV panel ọkọnọ ga-eri ha!
Market research gị n'ụlọnga Omdia wepụtara ọhụrụ ọmụma, Ọ na-eme atụmatụ na LCD TV panel Mbupu ga-256 nde na 2021. 6% afọ-na-afọ, Ma zuo olu nke n'elu 10 TV ika ụlọ mmepụta ihe na-amụbawo budata ka 86%. ， N'afọ na-abịa, ọ nwere ike ibute ọgụ maka ihe ntanetị TV ....